ओभरग्रेन्ड लङ्ग हिपी ड्रेसहरू - बुद्धाफ्रेंड्स
$ 75.65 $ 89.00 तपाईंले 15% बचत गर्नुभयो ($ 13.35)
jujube लाल / एस jujube रातो / एम jujube लाल / एल jujube रातो / एक्सएल jujube रातो / XXL jujube रातो / XXXL Jujube रातो / 4XL Jujube रातो / 5XL Jujube रातो / 6XL Teal / S Teal / M टील / एल Teal / XL Teal / XXL Teal / XXXL Teal / 4XL Teal / 5XL Teal / 6XL खैरो / एस खैरो / एम खैरो / एल खैरो / लार्ज ब्राउन / XXL ब्राउन / XXXL ब्राउन / 4XL ब्राउन / 5XL ब्राउन / 6XL पहेंलो / एस पहेंलो / एम पहेंलो / एल पहेंलो / लार्ज पहेंलो / XXL पहेंलो / XXXL पहेंलो / 4XL पहेंलो / 5XL पहेंलो / 6XL आइवरी / एस आइवरी / एम आइवरी / एल आइवरी / एक्सएल आइवरी / XXL आइवरी / XXXL आइवरी / 4XL आइवरी / 5XL आइवरी / 6XL सेतो / एस सेतो / एम सेतो / एल सेतो / लार्ज सेतो / एक्सएक्सएक्स सेतो / XXXL सेतो / 4XL सेतो / 5XL सेतो / 6XL गहिरो रेड / एस गहिरो रातो / एम गहिरो रातो / एल गहिरो रातो / एक्सएल गहिरो रातो / XXXL गहिरो रातो / 4XL गहिरो रातो / 5XL गहिरो रातो / 6XL बैजनी / एस बैजनी / एम बैजनी / एल बैजनी / लार्ज बैंगनी / XXL बैंगनी / XXXL बैजनी / 4XL बैजनी / 5XL बैजनी / 6XL कालो / एस कालो / एम कालो / एल कालो / एक्सएक्सएल कालो / XXXL कालो / 4XL कालो / 5XL कालो / 6XL ग्रे / एस ग्रे / एम खरानी / एल खैरो / एक्सएल खैरो / एक्सएक्सएल खैरो / XXXL ग्रे / 4XL ग्रे / 5XL ग्रे / 6XL सुन्तला / एस सुन्तला / एम सुन्तला / एल सुन्तला / XXL सुन्तला / XXXL सुन्तला / 4XL सुन्तला / 5XL सुन्तला / 6XL हल्का बैजनी / लार्ज हल्का बैजनी / 4XL हल्का बैजनी / 5XL हल्का बैजनी / 6XL
Cette robe मलाई Merveille को संतुष्ट: द्विभाषी लम्बा र अनुकूलन संग ठूलो गाजर। जीएम मेसेर 1 मेगा 80 र 95 किलो। यो छ कि यो जोली र ला को छ कि यो चुनौति को रूप मा छ। एक उपहार दिनुहोस! सोम मारी र म5/5छ!
उत्कृष्ट सेवाको लागि धन्यवाद। यो पहिलो पटक मैले आदेश दिएका थिए र मेरो अनुहार केही अज्ञात कारणका लागि मेरो पोस्ट अफिस द्वारा डेलिभर गरिएको थिएन तर फर्किए। तपाईंले तुरुन्तै मलाई एक्सप्रेस मेल द्वारा अर्को पठाउनुभयो जब मैले तपाईंलाई घटनाको बारेमा जानकारी दिएँ। मैले भर्खरै मेरो दोस्रो अर्डर राखें, तपाईं एक विश्वसनीय कम्पनी हुनुहुन्छ र म तपाईंको ग्राहक मध्ये एक हुन खुसी छु!
यो कपडा पाईयो, र यसलाई माया गर्छु। अरूसँग सहमत हुनुहोस्, वास्तविक जीवनमा असल। मैले यसलाई 5X मा किनेँ तर उदार हुदै, यो अर्को साइजमा किन्न सक्थ्यो। मैले खरीद गरेको अर्को पोशाक प्राप्त गर्न अगाडि खोज्दैछु। पहिले देखि नै स्कैफफाइल थाइल्यान्डको लागि सूर्यको सुरक्षाको रूपमा पूर्ण हुनेछ। सेवाको साथ धेरै खुसी
अद्भुत ड्रेस! मलाई साँच्चै रंग र बनावट मनपर्छ! म चाहन्छु जस्तै बिल्कुल चाहानुहुन्छ। एक मात्र टिप्पणी: धेरै संकीर्ण गर्दन। मेरो टाउको आकार 55 सेमी, यो शायद नै उपयुक्त छ। र मलाई लुगा लगाउनु पर्छ कि म चाहान्छु। मेरो उचाई 163 सेन्टर ड्रेस मात्र मध्य-बाछोको तल हो। डिलिवरी2हप्ता लिनुभयो। धन्यवाद स्टोर र बिक्रेता !!! म एक खुशीको ग्राहक हुँ।
अद्भुत, यो पोशाक मनपर्छ। गहिरो जस्तो फिट हुन्छ! म पक्का यकिन गर्नेछु।
मैले एम (मानक आकार) लिनुभयो र सही निर्णय गरे। यो बिल्कुल फिट बस्छ! र फोटो जस्तै जस्तो देखिन्छ। मैले लामो समयदेखि यो पोशाकको सपना देखेको थिएँ तर भण्डारहरूमा। यो अविश्वसनीय छ! गुणस्तर उत्कृष्ट हो, हल्का कपडा, यद्यपि लामो-आस्तीन हुन्छ तर गर्मीमा गरम हुँदैन। गाईहरूको आकार, जस्तै मेरो स्तरमा सिमाएको छ। सामान्यतया, म खुसी छु, एक हात्ती जस्तै :) यद्यपि दोस्रो खरीद :)
विंटेज साम्राज्य कमर रमी मैक्स ड्रेस
विंटेज साम्राज्य कमर रमी मैक्स ड्रेस बेच
Casual Zen Oversized Cotton Dress $ 75.65 $ 89.00
पुष्प ग्रैडिएट कपास र लिनन कपडा
पुष्प ग्रैडिएट कपास र लिनन कपडा $ 73.95 $ 87.00
विंटेज वी-नेक कपास लिनन मेक्स ड्रेस
विंटेज वी-नेक कपास लिनन मेक्स ड्रेस $ 75.65 $ 89.00
लसुन बटन माथि शर्ट ड्रेस
लसुन बटन माथि शर्ट ड्रेस $ 37.20 $ 62.00
जेन गार्डन साम्राज्य कमर मिडी ड्रेस
जेन गार्डन साम्राज्य कमर मिडी ड्रेस $ 56.95 $ 67.00
Hippie at Heart कपास लिनन व्हाइट मेक्स ड्रेस
Hippie at Heart कपास लिनन व्हाइट मेक्स ड्रेस $ 91.80 $ 108.00
Oversized Linen Midi ड्रेस
Oversized Linen Midi ड्रेस $ 67.15 $ 79.00